ThutaSone - Page 448 of 574 - Media and Entertainment
January 25, 2019 ThutaSone 0
Beauty Blogger အဖြစ်ကနေ မင်းသမီးတစ်လက်အဖြစ်ကို အချိန်တိုတိုနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့နေခြည်ဦးဟာဆိုရင်သူမရဲ့ပထမဆုံးဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တဲ့ “ရန်သူ”ဇာတ်ကားနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့တခဲနက်အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပြီး အဲဒီဇာတ်ကားနဲ့ပဲ အကယ်ဒမီတစ်ကြိုပေးခြင်းကိုလည်းခံထားရသူပါ။ နေခြည်ဦးက အခုဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဇယ်ဆက်သလိုရိုက်နေပြီဖြစ်ပြီး အလုပ်တွေလည်းဆက်တိုက်လုပ်နေပါတယ်။ ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလ (၂၅) ရက်ဟာ နေခြည်ဦးရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပြီး နေခြည်က အဲဒီနေ့မှာအလုပ်တွေဆက်တိုက်ရှိနေမှာဖြစ်လို့ မွေးနေ့အကြိုအလှူတွေကို စောပြီးလုပ်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နေခြည်က မွေးနေ့ကို […]
နေအိမ်ကို မီရှို့ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူကို ရိုက်နှက်မှုဖြစ်ပွား….
24.1.2019.နံနက် ၇း၀၀.အချိန်ခန့် .သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် ကလိုင်ပဒေါရွာ နေအိမ် မီရှို့ပြီး.ဖခင် ဖြစ်သူကို ရိုက်နှက်မှုဖြစ်ပွား ကလိုင်ပဒေါရွာနေ.ဦးဝင်း. သားဖြစ်သူ.မောင်ကျော်မြင့်(၁၉)နှစ် မှ.၎င်းတို့ နေအိမ်ကို မီးရှို့ပြီး.ဖခင်ဖြစ်သူ.ဦးဝင်.ကိုလဲ.4×2.သစ်ပိုင်းဖြစ်ထိုး၍.ဦးခေါင်း ဒါဏ်ရာရ၍…. သံဖြူဇရပ်မြို့ ဆေးရုံသို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ် မီးလောင်ရာ နေရာသို့ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်မှ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုး.နှင့် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ….. တာဝန်ရှိ […]
အတူရိုက်ကူးခဲ့ဖူးတဲ့ ဇာတ်ကားလေးကြည့်ပြီး သွားလေသူတွေကို သတိရနေတဲ့ လွင်​မိုး
ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေကတည်းက အနုပညာကို မြတ်နိုးလွန်းလို့ ပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်စေဖို့ ဟာသတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ကြီး ဦးကင်းကောင်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းလောက်က ဘဝတစ်ပါးသို့ ကူးပြောင်းကွယ်လွန်သွားတာမို့ မိသားစုဝင်တွေ ခင်ရမင်ရသူတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးက ကြေကွဲပူဆွေးနေကြတာပါ။ ဦးကင်းနဲ့ မိသားစုတွေလို အရမ်းခင်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ […]
ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် ဦးဖိုးဖြူ ကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဆန္ဒသုခ ပရဟိတ ဆေးခန်းမှာ အသည်းယောင် အသားဝါ ဘီပိုး စီပိုးကို အဓိကထားကုသပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဦးဖိုးဖြူက ဆေးခန်းဖွင့်ထားတဲ့ အကြောင်းကို ခုလို ပြောပြပါတယ်. . “လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်က ဦးက အသဲယောင်အသားဝါ စီပိုး […]
တစ်အိမ်ထဲက ထိုးပေမယ့် တစ်ရွာလုံးပေါက်သွားတဲ့ အောင်ဘာလေ ရေထီကြီး
တစ်အိမ်တည်းသုံးဖို့ ရေတွင်းတူးရာ တစ်ရွာလုံးဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ရွာကလေး အောင်ဘာလေထီကြီးကို တစ်ရွာလုံး ပေါက်သွားသလိုမျိုး ပျော်ရွှင်ခံစားကြရပါတယ်..။ မလှိုင်မြို့ ဆည်ကျေးရွာမှာ အိမ်သုံးအဝီစိစက်ရေတွင်း တူးရာမှ တစ်နာရီကို ရေဂါလံ (၁၀၀၀)ခန့်ထွက် စက်ရေတွင်း ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မလှိုင်မြို့နယ်ဟာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိတ္ထီလာခရိုင်မှာ ပါဝင်ပြီး ကျေးရွာပေါင်း (၂၄၇)ရွာ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း(၅၂)အုပ်စု ရှိရာ […]
​ပြောင်​​မြောက်​​​သော သူရသတ္တိဖြင့်​ တာဝန်​ကို ရဲဝံ့စွန်းစားစွာ ထမ်း​ဆောင်​ခဲ့​သော​ကြောင့်​ သူရဘွဲ့ရရှိပြီး နိုင်ငံတာဝန်ကို ကျရာအခန်း ကဏ္ဍကနေ မငြီးမငြူတာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​​နေ​သော အရာရှိကောင်းတစ်​ဦး ဖြစ်​ပါသည်​။ဗိုလ်​သင်​တန်းတက်​​ရောက်​အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ခလရ(၄)4Gurkha Rifle မှာ ဒုတိယဗိုလ်​ အဆင့်​နဲ့ စတင်​ပြီး တာဝန်​​တွေ ထမ်း​ဆောင်​ခဲ့ပါသည်​။ အရပ်သုံးစကားနဲ့ပြောရင် ဂေါ်ရခါးတပ်ရင်း။ ဖိုက်တာတပ် […]
လက်ရှိ မေတ္တာသုတ်ရွတ်နေသူများပိုပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန် မေတ္တာပွားများပါ
“လက်ရှိ မေတ္တာသုတ်ရွတ်နေသူများ” “ပိုပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန် မေတ္တာပွားများပါ” မေတ္တာသုတ်ကို နေ့စဉ်ရွတ်လို့ရှိရင် အန္တရာယ်တွေကင်းတယ် လို့ ဒီမေတ္တသုတ်ထဲမှာ ပြဆိုထားတဲ့စကား တစ်လုံးမှမပါဘူး.. သို့သော် အများက ဒီအတိုင်းပဲ ယုံကြည်နေကြတယ်.. မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် “တို့လူတွေက သောက်ဆေးကို လိမ်းဆေးလုပ်နေကြတယ်”တဲ့.. သောက်ရမှာကို မသောက်ပဲနဲ့ လိမ်းဆေးအဖြစ်အသုံးပြုနေလို့ရှိရင် အကျိုးသက်ရောက်မှု […]
ကျောင်းစတက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသူလေး ခေတ်နဲ့ သစ်လေးတို့ရဲ့ချစ်စရာ ဗီဒီယိုလေးတွေ
January 24, 2019 ThutaSone 0
အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးချောလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ရဲ့အိမ်ဂေဟာလေးကတော့ အမြဲလိုလို ရယ်မောသံတွေနဲ့ ဆူညံနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ​မေ​မေချစ်​သု​ဝေက ကျောင်းစတက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ခေတ်လေးနဲ့ သစ်လေးတို့ရဲ့ချစ်စရာဗီဒီယိုလေးကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဝေမျှပေးထားတာဖြစ်ပြီး ပထမဦးဆုံးအကြိမ် သမီးလေးတွေကို ထားခဲ့ရတာမို့ ငိုမိခဲ့တဲ့အကြောင်းကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဝေမျှပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုမှကျောင်းစတက်ကြတာပေမယ့်လည်း ခေတ်လေးနဲ့ […]
ပရိုပိန်း (Propane) နဲ့ ဗျူတိန်း (Butane) ရောစပ်ပါဝင်နေတဲ့ ရေနံဓါတ်ငွေ့ရည် (Liguid Petroleum Gas – LPG) ဟာ Gas မီးဖိုမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဓါတ်ငွေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရေနံဓါတ်ငွေ့ရည် (LPG) ကို ဓါတ်ငွေ့စက်ရုံမှာ compressors တွေ ၊ condensers […]
လက်နှစ်ဘက်မပါပေမယ့် ရွှေတံဆိပ်တစ်ခု ၊ ငွေတံဆိပ်သုံးခုနဲ့ကြေးတံဆိပ် တစ်ခုဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့သူမက လမ်းပေါ်မှာ တောင်းစားနေရတယ်အဲ့ဒါ အစိုးရ အသုံးမကျလုို့ပဲ။ မြန်မာရေကူးမယ်လေးတစ်ယောက်ဟာလက်နှစ်ဖက်မပါဘဲမွေးဖွားလာခဲ့ပေမယ့်၂၅ ကြိမ်မြောက်မြန်မာအမျိုးသားအာကစားပွဲတော် မှာ ရွှေတံဆိပ်တစ်ခု ၊ ငွေတံဆိပ်သုံးခုနဲ့ ကြေးတံဆိပ် တစ်ခုဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိသားစုကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ အာစီယံပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ အစီအစဉ်ကိုစွန့် လွှတ်ပြီး လမ်းပေါ်မှာ ပိုက်ဆံတောင်းတဲ့သူအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေရပါတယ်။ CRD-ဓါတ်ပုံဇာတ်လမ်း-ရဲဇော်ဖြို […]
« 1 … 447 448 449 … 574 »